10 Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub
Dhulkii ballaarnaa ee Yurub waa asalkii halyeeyo badan iyo sheekooyin cirro leh, muuqaallada quruxda badan iyo tuulooyinka xafida siraha qadiimka ah. U dhaw magaalooyinka badweynta ama meel ka durugsan buuraha dhaadheer, Tirada tuulooyinka quruxda badan ee xiisaha leh ee Yurub waa mid aan dhammaanayn. weli, waxaa jira 10 tuulooyin qurxoon oo ku yaal Yurub oo quruxdooda iyo sixirkoodu ay kor u qaadaan kuwa kale oo dhan.
gaadiidka Tareenka waa habka ugu bay'adda u fiican in safarka. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, The Bogagga Tikidhada Tareenka ee ugu Jaban Adduunka.
1. Fiiri, Switzerland
Tuulada ugu quruxda badan Switzerland, Guarda waa tuulo yar, ku yaal seeraha cagaaran dhexdooda. Qeybta hoose ee dooxada Engadin, ama sida dadka deegaanku ugu yeeraan, Engiadina waxay xukuntaa aragtida guud ee Swiss. Waxay ku dhisan tahay dhul qorrax leh, 300 mitir korka dooxada, dhawrista dhamaan imaatinka iyo imaatinka, iyo sidoo kale dhaqamadii hore sida loo eryanayo jiilaalka.
Guryaha cad waxaa lagu qurxiyey rinjiyeyaal dhaqameed iyo qoraallada qadiimiga ah ee loo yaqaan sgraffiti. Rooma, luqadda maxalliga ah, in ka badbaaday oo ilaa maantadan la hadlay.
Basel ilaa Chur by Tareenka
Bern ilaa Chur by Tareenka
Turin ilaa Tirano by Tareenka
Bergamo ilaa Tirano by Tareenka
2. Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub: Cochem, Germany
Tuulada seexanaysa durdurkeeda wabiga Moselle. Guryo nus-saacad leh iyo guryo qurux badan oo leh dariiqyo cidhiidhi ah. Ku qurxoon dayrta, marka cawska cagaaran iyo geedaha ay xidhaan labiskooda dahabiga ah, ku darista jiidashada iyo muuqaalka muuqaalka quruxsan ee Cochem.
Ku hareereysan beero canab iyo buuro leh, Tuulada Cochem waa kaamil-waraaq oo kaamil ah. Sida ugufiican ee aad kudhaqmikarto tuulada oo aad ugahadasho dhamaan muuqaalka tuulada muuqaal ahaan waa baaskiil.
Frankfurt ilaa Cochem oo uu tababaray
Bonn to Cochem by Tareenka
Cologne to Cochem by Tareenka
Stuttgart to Cochem by Tareenka
Inta u dhaxaysa meelaha dhaadheer, dhinaca wabiga Meuse, fadhiyaa tuulada quruxda badan ee Dinant ee gobolka Wallonia. Cimilada cimilada, jiilaalka, ama guga, Tuuladan yar waxay umuuqataa mid aad u yaab badan cimilo kasta iyo maalin kasta. Muuqaalada waaweyni xitaa waxay ka qurxan yihiin dhaadheer-buuraha dhaadheer.
Qulqulka Collegiale Notre-Dame De Dinant waa muuqaal caan ah oo asal ahaan ka soo jeedda buuraha madow ee madoow. Guryo midab leh iyo doomo waaweyn oo safka hore ku jira, buuxi aragtiyaha xiisaha leh.
Haddii aad haysatid waqti dheeri ah, booqo Castlecoeur Castle ee u dhow, Jardiinooyinka Annevoie, iyo Chateau de Veves si aad u hesho aragtiyo badan oo boosta ku qoran.
Brussels ilaa Casimadda Tareenka
Antwerp ilaa Casho ee Tareenka
Sifada Casho ee Tareenka
Ujeedada Quant by Tareenka
4. Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub: Norcia, Italy
Ka gadaal gidaarada difaaca, Buuraha cagaaran dhexdooda, ee bariga Umbria, waxaad ogaan doontaa tuulada quruxda badan ee Norcia. Tuuladan yar yar waa mid qurux badan oo u muuqata mid aad u qurux badan xilliyada gu'ga marka ay hareereeyaan ubaxyo cod midabo leh.
kaniisadaha, Qasriyadii Talyaani, ku dar fikradaha riwaayadaha ee Norcia. Sidoo kale, Webiga Nera waa goob kale oo la baaro iyo ku raaxayso aragtiyo xiiso leh ee gobolka quruxda badan ee Umbria ee Talyaaniga. Jidkaaga iska hubi inaad fiiriso gawaarida caanka ah, oo dhadhamin cuntada maxalliga ah ee loo yaqaan 'spaghetti' ama 'frittata' oo leh weel shiil. Si fudud waa ilaahnimo!
5. Si fudud, Netherlands ayaa
Haddii aad u safreyso Holland si aad uga dabacdid meelaha sare ee tulip, ka dib booqo muuqaal muuqaal ah Lisse. Tuuladan qurxoon waa cadaalad 45 daqiiqo ka fog Amsterdam.
Lisse waa laga yaabaa inay ka mid tahay tuulooyinka ugu yar ee Nederland, laakiin waxay hoy u tahay 7 milyan oo nalalka ubax ah ayaa lagu beeray sanad walba Beeraha Keukenhof. Dhamaadka Maarso ilaa badhtamaha Maajo, Nalalkaani waxay ubaxeen ubax qurux badan oo midab leh. Sayidka, Liss shaki la'aan waa kan ugu jacaylka guga oo waxaad ku jirtaa darisyo iyo aragtiyo aan la ilaawi karin.
6. Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub: St. Gilgen, Austria
Qof kastaa wuu garanayaa Hallstatt sixir, laakiin Austria waxay hoy u tahay tuulooyin badan iyo qurux badan. Mid ka mid ah tuulooyinka ugu quruxda badan Yurub wuxuu ku yaal Austria. St. Tuulada Gilgen waxay ahayd guriga reerka Mozart mar, Tuulada waxay ku fadhiisataa dhinaca wabiga Wolfgang.
Waxaad ku baadhi lahayd tuulada lug ama baaskiil, ama ka soo qaad baabuurka fiilada. Haddii aadan qabin cabsi ku saabsan meelaha dhaadheer, markaa aragtiyaha ka furma gaariga fiilada ayaa macno ahaan neeftaada kaa qaadi doona. Muuqaallada muuqaalka ee tuulada ayaa runtii dhiirrigeliyay farshaxanada Viennese.
Munich ilaa Salzburg by Tareenka
Vienna ilaa Salzburg by Tareenka
Graz ilaa Salzburg by Tareenka
Linz ilaa Salzburg by Tareenka
7. St. Caadooyin, France
Hoyga Cunnooyinka Macaan ee Faransiiska Foie Gras iyo truffles, tuulada yar ee St. Genius waa 2 saacado laga bilaabo Bordeaux. Tani waxay damaanad qaadeysaa beero canab ah oo qurux badan, meeshaad ku raaxeysan karto hal galaas oo khamri wanaagsan iyadoo aad u xiiseyneyso muuqaalka tuulada iyo baadiyaha.
St. Tuulada Genies ayaa leh astaamahayaga 10 tuulooyin qurxoon oo ku yaal Yurub oo looga mahadceliyay guryo diiran oo saqaf ah. Intaa waxaa dheer, the 12th-century church and 13th-century castle are right in the center of the village. Waddo dabayshu waxay ka tallaabi doontaa tuulada iyo guryaheeda dhagaxa ah ee midabkoodu madow yahay illaa aragtida iyo goobaha ugu xiisaha badan.
St. Jinsiyadaha ayaa muujinaya jawiga sheeko xumada Faransiiska ay ku barakeeyeen. Muuqaalka waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaalka safar tareen guud ahaan Faransiiska.
8. Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub: Biqil, England
Guryaha dhagxaanta leh ee dhagaxa leh ee saqafku ka buuxo oo leh doog cagaaran agagaaraha waa waxa ka dhiga Bibury mid ka mid ah tuulooyinka ugu quruxda badan Yurub.. Hubso inaad hoos ugu socoto Arlington Row, haadka ugu quruxda badan iyo snaps qurux badan.
Luggu wuxuu toos kuugu soo celin doonaa nolosha qarnigii 17aad qarnigii hore. Tuulada ugu quruxda badan England waxay ku taal banka River Coln. Tani waxay ahayd goobtii ugu fiicnayd ee lagu xardho dhogorta dusha sare ee looxyada. Dhul gariirku waa ku fiican yahay a gelinka dambe ama safarka hore ee subaxnimada ka hor intaanay dadka dalxiisayaashu faragelin degganaantiisa iyo gariirka hurdada.
Paris ilaa London waxaa qoray Train
Berlin ilaa London waxaa qoray Tareenka
Brussels ilaa London by Train
9. Lindau gudaha Jarmalka
Tuulada Lindau waxay ku taalaa xadka Austria iyo Jarmalka, gudaha Bavaria Jarmalka. Waa mid ka mid ah gobollada ugu quruxda badan a fasaxa xagaaga ee Yurub. Xeebta Lake Constance, sidoo kale loo yaqaan Bodensee, Tuuladan dhab ahaantii waa jasiirad, iyadoo buundo isku xirta badweynta iyo jasiiradda.
Dhowr ka mid ah aragtida muuqaalka ee tuulada waa jidka Maximilianstrasse, ileyskii hore ee qarnigii 13aad, iyo dabcan Old Town, Altstadt.
Lindau waa miro qarsoon gudaha Jarmalka iyo tuulo gebi ahaanba u qalma booqashadaada safarkaaga soo socda. Waxa jira tareeno Eurocity oo ka socda Munich, Zurich, iyo Stuttgart.
Berlin ilaa Lindau waxaa qoray Tareenka
Munich ilaa Lindau waxaa qoray Train
Stuttgart to Lindau oo Tareen ah
Zurich to Lindau waxaa qoray Train
10. Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub: Czech Krumlov, Czech Republic
UNESCO site dhaxal ahaan dunida, Tuulada Cesky Krumlov ee Bohemia waa isku dhafka Renaissance, Gothic, iyo dhismaha Baroque. Kala go'ay Wabiga Vltava, Cesky Krumlov waa mid ka mid ah webiyada ugu quruxda badan Yurub. Muuqaalka guryaha ku yaal bangiyada oo leh dabeecadda quruxda badan ee asal ahaan dhab ahaantii waa mid ka mid ah aragtida ugu layaabka badan Yurub. Taasi waa sababta uu Cesky Krumlov na saaran yahay 10 tuulooyin qurux badan oo ku yaal Yurub.
Waxaa si weyn loogu talinayaa in la fuulo qalcadda Cesky Krumlov ee loogu talagalay bannaanka aan la ilaawi karin ee Cesky Krumlov, Wabiga Vltava, iyo dabeecad qurux badan oo ku xeeran gobolka Bohemia.
Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub
Qaar ka mid ah tuulooyinka ugu quruxda badan Yurub waxay ka qarsoon yihiin dad badan oo dalxiisayaal ah oo jooga buuraha waaweyn. Quruxdan qarsoon ayaa laga yaabaa inay u ekaadaan meel la gaari karo, laakiin leh tikniyoolajiyadda maanta, way ka dhowyihiin weligood. Tuulo walba waad tagi kartaa gaadiidka dadweynaha, safar safar tareen oo gaagaaban oo ku baahsan Yurub oo dhan. Dhowr saacadood gudahood waad wareegi lahayd, soo dhaweynta iyo sawir qaadista dhaqamadaas iyo aragtiyahooda qarsoon.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tikidhada tareenka ugu raqiisan mid ka mid ah tuulooyinkan qurxoon ee Yurub.
Adiga Waxaan rabaa in aan ku soo daabacno bartayada mareegta “10 Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/ የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
beautifuldestinations beautifulvillageseaurope Fairytaletowns scenicvillageseurope tuulooyinka